Idi China FK835 Automatic Production Line Plane Labeling Machine factory na suppliers |Fineco
Igwe akara akara FK835 akpaka nwere ike dakọtara na ahịrị mgbakọ mmepụta iji kpọọ ngwaahịa ndị na-asọpụta n'elu elu na elu gbagoro agbagọ iji ghọta akara n'ịntanetị na-enweghị mmadụ.Ọ bụrụ na ọ dakọtara na eriri nnyefe koodu, ọ nwere ike ịkpọ ihe ndị na-asọ asọ.Mpempe akwụkwọ nkenke dị elu na-egosipụta ịdị mma nke ngwaahịa ma kwalite asọmpi.A na-eji ya na nkwakọ ngwaahịa, nri, ihe egwuregwu ụmụaka, kemịkalụ kwa ụbọchị, ngwa eletrọnịkị, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Igwe akara akara akpaka FK835 nwere ọrụ ndị ọzọ iji bulie nhọrọ:
Enwere ike ịgbakwunye igwe mkpuchi rịbọn nhọrọ na isi akara, na enwere ike ibipụta batch mmepụta, ụbọchị mmepụta na ụbọchị njedebe n'otu oge.Belata usoro nkwakọ ngwaahịa, kwalite nrụpụta mmepụta nke ukwuu, senso label pụrụ icheKwado igwe ịde aha ahaziri iche dịka ngwaahịa ahụ siri dị.
FK835 akpaaka akara akara igwe dabara adaba maka ngwaahịa na-achọ nnukwu mmepụta, nke nwere akara ngosi dị elu nke ± 0.1mm, ọsọ ọsọ na ịdị mma dị mma, yana ọ siri ike iji anya gba ọtọ hụ njehie ahụ.
Igwe akara akara akpaka FK835 na-ekpuchi mpaghara ihe dịka 1.11 cubic mita
Ike (pcs/min) 40 ~ 150
Nha ngwaahịa suut (mm)
Nha akara suit (mm) L: 10-250;W (H): 10-130
Nha igwe (L*W*H)(mm) ≈800 * 700 * 1450
Nha ngwugwu (L*W*H) (mm) ≈810*710*1415
Ike (W) 330
Akwụkwọ mpịakọta Nọmba: 76;OD:≤280
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ tinye akwụkwọ mpịakọta.
Rollers ifufe labelụ mpịakọta.
Ihe mmetụta akara chọpụta akara.
Ngwaọrụ traction moto traction na-ebugharị iji see akara.
Hapụ imegharị akwụkwọ megharịa akwụkwọ ntọhapụ.
Ihe mmetụta ngwaahịa chọpụta ngwaahịa.
Nkwụsị ihe mberede kwụsị igwe ma ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ na-ezighi ezi
Ihe ndozi ịdị elu gbanwee elu nke labeling.
Igbe eletrik tinye nhazi eletrọnịkị
Frame nwere ike ahaziri imeghari ka mmepụta ahịrị.
Ihuenyo mmetụ aka arụ ọrụ na ntọala ntọala
ụkpụrụ ọrụ: Ihe mmetụta ahụ na-achọpụta ngafe nke ngwaahịa ahụ wee zighachi akara ngosi na sistemụ njikwa akara.N'ebe kwesịrị ekwesị, usoro nchịkwa na-achịkwa moto iji zipu akara ma tinye ya na ntinye aha nke ngwaahịa ahụ.Ngwaahịa a na-agafe akara akara, yana akara Emechara ihe mgbakwunye ahụ.
Ngwaahịa (jikọrọ na ahịrị mgbakọ) -> nnyefe ngwaahịa -> nnwale ngwaahịa -> akara.
2) Sistemụ arụmọrụ: ihuenyo mmetụ agba, ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa China na Bekee dị.Dị mfe iji dozie paramita eletrik niile ma nwee ọrụ ịgụta ọnụ, nke na-enyere aka maka njikwa mmepụta.
3) Sistemụ nchọpụta: Iji German LEUZE/Italian Datalogic label sensọ na Japanese Panasonic ngwaahịa sensọ, nke na-enwe mmetụta maka labelụ na ngwaahịa, si otú ahụ hụ na elu izi ezi na kwụsiri ike labeling arụmọrụ.Na-azọpụta ọrụ nke ọma.
4) Ọrụ mkpu: Igwe ahụ ga-enye mkpu mgbe nsogbu dị, dị ka wụsa labelụ, akara agbajiri ma ọ bụ adịghị arụ ọrụ ndị ọzọ.
5) Machine Material: Igwe na akụkụ mapụtara niile na-eji ihe igwe anaghị agba nchara na anodized agadi aluminum alloy, na elu corrosion iguzogide na mgbe nchara.
Nke gara aga: FK912 Igwe nrụbama akụkụ akpaaka
Osote: Igwe ntunye akụkụ FK836 akpaaka Production Line
igwe nkpọkọta ahịrị elu igwe
Igwe na-ede akwụkwọ mpịakọta ihe nkiri
igwe nkpuchi mmepụta ahịrị akara
igwe na-edobe akwa na-abụghị kpara akpa
igwe na-ede aha na-abụghị nke akpara akpa
mmepụta akara ụgbọelu labeling igwe
mmepụta ahịrị elu akara igwe
Enwere ike ijikọ igwe na-ede aha na mbufe
igwe na-edobe ihe nkiri dị mkpa